UKUBALULEKA KOKUBHIYOZELA UMNYHADALA WEVISHU- PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-YOKOMOYA
Ukubaluleka kokuBhiyozela uMnyhadala weVishu
Ekhaya Yokomoya yeYoga Imibhiyozo Ukholo Mysticism oi-Asha Ngu UAsha Das | Ipapashwe: ngolwesiThathu, ngo-Epreli 15, 2015, 4:00 [IST]
Kwi-kerala, usuku lokuqala lwenyanga yeMalayalam iMedam ibhiyozelwa njenge-Vishu. Kwiindawo ezahlukeneyo zaseIndiya, umnyhadala omnye ubhiyozelwa ngamagama ahlukeneyo. E-Assam ngu-Bihu, ePunjab egameni le-Baisakhi nakwi-Tamil Nadu Puthandu.
Ukubaluleka komnyhadala we-vishu kukuba ngumnyhadala wesivuno kwaye ke oko kubonisa ukuchuma. IVishu ibonisa ukuhamba kwelanga ukuya eMeda Raas nakwintwasahlobo ye-equinox.
Iindlela zokwenza ikhaya lakho libe lelikhethekileyo kwiVISHU
Oku kuneeyure ezilinganayo zokukhanya kwelanga kunye nobumnyama kwaye iVishu kwisiSanskrit kuthetha ukulingana. IVishu ithathwa njengenyathelo lokuqala lonyaka omtsha ochumileyo.
Ngelixa uninzi lweminyhadala ilandela ibali, ukubaluleka kweVishu kulele kwinto yokuba ayisekelwanga kulo naliphi na ibali, kodwa konke malunga nesivuno esityebileyo sabantu abasebenza emhlabeni. Isivuno esihle siya kuzisa ulwaneliseko kunye novuyo.
Iindlela zokupheka ezili-10 zokuzama kwiVishu
Kukholelwa ukuba into oyibonayo kuqala kwiVishu kusasa iya kuba luphawu lwento oza kuyifumana kunyaka ozayo.
Ngapha koko, okunye ukubaluleka komnyhadala weVishu kukuba ngumnyhadala wokudibana kwaye abantu baya kuzama ukudibana kumakhaya abo. Makhe sijonge ukubaluleka kwezithethe zomnyhadala weVishu.
Ukubona okuhle kwasekuseni nge-Vishu, lisiko lokubandakanya yonke into eyinxalenye yesivuno esihle njenge ‘Vishukkani’. Amalungiselelo esiko leVishukkani linemifuno, ngakumbi imango, ikhokhonathi esikiweyo enesiqingatha, ijackfruit, ikhukhamba, iglasi irayisi egcweleyo, ilokhwe yakudala yekerala ebizwa ngokuba yi-set mundu, isipili, igqabi le-betel, i-arecanut, igolide kunye neengqekembe kwisitya sensimbi esibizwa ngokuba yi-uruli.
Ukutya kweMveli kweKerala yinxalenye ebalulekileyo yeVishu. Oku kubandakanya zonke izitya ze-sadya kwaye amalungu osapho aya kuyonwabela i-sadya ehleli kunye, ngokubanzi phantsi. I-sadya iya kuhanjiswa kumagqabi e-plantain kunye ne-pradhaman ekupheleni kwesidlo. Ukubaluleka komnyhadala weVishu sadya kukuba iqulethe inani elilinganayo lezitya ezinetyuwa, ezithandekayo, ezimuncu nezinomuncu.
Ukubaluleka komnyhadala onxulumene ne-Visine kaineettam kukuba ubonakalisa intlonipho kubantu abadala kunye nokudibana kwamalungu osapho.
Umntu omdala wosapho uya kunika abancinci imali kwaye kukholelwa ukuba ukufumana iVishu kaineettam kuya kukuzisela bonke ubutyebi nokuchuma kulo nyaka uzayo. Abancinci kusapho baya kufumana i-kaineettam emva kokubonisa intlonipho yabo ngokuchukumisa iinyawo zabantu abadala.
Isinxibo esitsha yinxalenye ebangel 'umdla yalo mnyhadala wemveli. Kwixesha elidlulileyo, xa ukulima yayingoyena mvuzo wabantu, ukuthenga iilokhwe ezintle nezintsha zazinomda kwiminyhadala enje nge-Onam okanye iVishu. Ngoku imeko yonke itshintshile, kodwa isiko lokuthenga ilokhwe entsha yeVishu likho kunye nalo lonke uzuko lwayo.
I-Crackers kunye ne-fireworks yenye yezinto ezinomdla zeVishu. Kwi-kerala, abaqhankqalazi bahamba kakhulu ngexesha leVishu kuneDepavali. Usapho ngalunye luyakonwabela ubusuku babo ngeziqhushumbisi kunye nabaqhekezi. Enye intsingiselo yomnyhadala weVishu kunye nabaqhekezi kukuba iyakuvumela lonke usapho ukuba lube nexesha losapho olonwabisayo kunye.
IVishu lixesha lokubulela uThixo ngento esiyifumeneyo kwaye silinde unyaka omtsha onempumelelo.
Kufuneka umfana aqhubeke ixesha elingakanani ebhedini
indlela yokwenza ulusu lwakho luvuthe ekhaya
ubugcina njani ubuso bucocekile kwaye bukhanya ngokwendalo
iqanda elimhlophe lokususa iinwele ebusweni
ujongeka njani ulungile kwi saree ukuba ulibhityile